Kismaayo News » Jubbaland iyo Turkiga oo isla jaanqaaday
Jubbaland iyo Turkiga oo isla jaanqaaday
Kn: Dhawaan waxaa magaalada Kismaayo safar ku tagay wafti uu hoggaaminayo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Bekar, wuxuuna ahaa safarkii ugu horeeyey ee uu safiirka ku tago Jubbaland, hadaba warbixintani waxaan si faahfaahsan waxyaabihii kasoo baxay booqashada.
Dublamaasiyad ahaan safarkani uu safiirka ku tagay magaalada Kismaayo wuxuu lahaa muhiimad weyn oo waji cusub u yeeshey xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya oo markii hore qabyo ahaa maadaamaa dhaqdhaqaaqa Turkiga uu ku koobnaa meelo dalka ka mid ah.
Horey safiirka waxa uu u booqdey maamulada Somaliland, Puntland iyo Koonfur Galbeed, iyada oo Jubbaland ay ahayd meeshii ugu dambeysey ee uu booqdey. Hase yeeshee safarka Jubbaland ayaa waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa kii ugu miisaanka cuslaa marka laga hadlayo balanqaadyada uu Turkiga sameeyey iyo isfahamka labada dhinac ay gaareen.
Mid ka mid ah waxyaabaha muujinaya sida Turkiga ugu qanacsanyahay maamulka Jubbaland ayaa ah hadiyadihii kala duwanaa ee dowladda Turkiga usoo dhiibtey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, kuwaasi oo ay xusid mudantahay in aysan la wadaagin mas’uuliyiinta kale ee maamul goboleedyada.
Waxaa hadiyadaha ka mid ah safxad qur’aanka kariimka ka mid ah oo dhalo lasoo galiyey, taasi oo la guddoonsiiyey Sheekh Axmed Maxamed Islaam.
Haddii dhinac kale laga eego waxa uu safarkani imanayo xili dhawaan ay heshiisyo wada galeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaasi oo meesha ka saarayay wax alaale wixii xanibaad ah oo xagga dowladda federaalka ka imanayay in gobolada ay soo gaarto kaalmada caalamiga ah iyo mashaariicda horumarineed. Heshiiskani ayaa waxaa hormuud ka ahaa dowlad goboleedka Jubbaland oo muujisey biseyl siyaasadeed oo aan meelaha kale ee dalka ka suurtoobin.
Safiirka Turkiga Olgan Bekar ayaa madaxda iyo mas’uuliyiinta Jubbaland u sheegey in dowladiisa ay si rasmi ah u balanqaadayso in 11 jaamacadood oo ka dhisan dalka Turkiga oo iyagu bixiya deeq waxbarasho ay deeq siin doonaan ardayda iyo dhalinyarada Jubbaland si heerka tacliinta ay u kororto.
Waxa kale oo uu balanqaaday in Turkiga uu Jubbaland ka fulin doono mashaariic kale oo horumarineed, gaar ahaan xagga caafimaadka iyo kaabashayaasha dhaqaalaha ee kale sida waddooyinka waxa la midka ah.
U qeybsanaha militariga ee safaaradda Turkiga oo waftiga qeyb ka ahaa ayaa isaga soo booqdey xeryo ciidan oo ku yaala meelo kala duwan oo gudaha iyo banaanka Kismaayo ah, wuxuuna xitaa booqdey xerada Goobweyn oo ay ku jiraan ciidamada ugu badan ee Jubbaland.
Waxa uu sheegey in Turkiga uu tabobar toos ah iyo qalabeyn u fidin doono ciidamada Jubbaland, iyada oo markani tabobarka uu Turkiga ku qaban doono dalka gudihiisa.
Waxa ay saraakiisha ciidamada aad ula dhaceen guulaha ay Jubbaland ay ka hortagto, islamarkaasina banjariso dhamaan isku dayada iyo weerarada ay maleegeen kooxaha kasoo horjeeda dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya. Waxa ay si gaar ah u boggaadiyeen wakaaladda sirdoonka Jubbaland oo iyadu shan talaabo ka horeysa cadawga, taasi oo ah wax ku dayasho mudan.
Waftiga waxaa qeyb ka ahaa hey’adda gargaarka ee Bisha Cas ee Turkiga taasi oo balanqaaday in ay guryo u dhiseyso dadka barakacayaasha ah, iyo kuwa qaxootiga ah ee soo guryo laabanayan, islamarkaasina fidineyso hawlo gargaar oo la mid ah kuwa ay ka fuliso meelo kale oo dalka ka mid ah.
Ganacsato iyo shirkado kala duwan oo qeyb ka ahaa waftiga ayaa iyaga booqdey dekada weyn ee magaalada Kismaayo , halkaasi oo ay ku balanqaadeen in ay dekada dayactir balaaran ku samayn doonaan, islamarkaasina la casriyeyn doono dekada si ay u noqoto mid xamili karta xamuul kasta oo kasoo degta.
Ganacsatada ayaa sidoo kale heshiis isfaham ah la gaarey ganacsatada iyo waliba rugta ganacsiga Jubbaland, kaasi oo ku saabsan sidii iskaashi u samayn lahaayeen labada dhinac, loona mideyn lahaa awooddooda, iyaga oo isweeydaarsan doona xirfado ganacsi, waayo-aragtinimo, xiriir wada shaqayn iyo waliba ka wada shaqayndoona kobcinta dhaqaalaha labada dal.
Kismaayo, Xarunta Ganacsiga Soomaaliya
Hawlaha ay Turkiga ka qabanayaan Soomaaliya kaliya ma ahan gargaar iyo mashaariic horumarineed oo kaliya, ee waxaa sidoo kale qeyb ka ah macaamil ganacsi oo hufan in uu dhex maro Turkiga iyo Soomaaliya.
Turkiga waxa ay aaminsanyihiin, gaar ahaan madaxweyne Erdogan in xalka uusan ahayn in dadka maalin kasta gargaar la siiyo, balse xalka uu yahay ganacsi si dadka ay u gaaraan isku filnaansho , una noqdaan kuwa adduunka wax kusoo kordhiya.
Malaha magaalada Kismaayo waa meeshii ugu habooneyd Soomaaliya gudaheeda oo uu ku bulaali lahaa ganacsi xor ah, misane ka hufan tartan foolxun oo mijo xaabis ah oo dhexmara Soomaaliya iyo Turkiga.
Waxyaabaha ganacsatada Turkiga dhiirogaliyey kaliya ma ahan xornimadda ganacsi ee ka jirta Jubbaland, ee sidoo kale waxaa aad u dhiirogaliyey nidaamka hufnaanta ee uu maamulka kula shaqeeyo ganacsatada iyo sida ganacsatada ay hormuudka oga yihiin dadaalada dib usoo kabashada dhaqaale ee Jubbaland.
Waxyaabaha kale ee Turkiga u bidhaamaya ayaa ah istaraatiijinimada magaalada Kismaayo ee xagga ganacsiga, waxayna tani micno weyn samaynaysaa marka uu maanka kusoo dhoco heshiisyada xagga ganacsiga ee balaayiinka doolar ku kacaya ee wadamada dariska ahuu Turkiga la galay, ganacsigaasi oo hadhoow loo baahan doono meel lasii mariyo.
Si kastaba ha ahaatee xiriirkani waa bog cusub oo u furmey Turkiga iyo Jubbaland oo intii muddo sanooyin ah sheeda uun ka daawanaysay waddankani hodanka ah ee sida gacan furnaanta ah ugu hagar baxay Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda.
Mid ka mid ah saraakiisha Jubbaland oo la hadlay wargeyska KismaayoNews ayaa sheegey in booqashadani waftiga Turkiga ay tahay mid micno badan ku fadhida, Jubbalandna ay diyaar u tahay in ay kaalinteeda kasoo baxso sida illaalinta amniga muwaadhiniinta Turkida ee gobolka imanaya iyo in si hufan oo caddaalad ah loo fuliyo mashaariicda horumarineed iyo hawlaha gargaarka ee kale.